ကွီးမှဝကျသကျပေါကျတဲ့အခါ - OnDoctor
By Kaung Htet Naing	 On Mar 8, 2019 Last updated Mar 9, 2019
မောင်ဒေါက်တာသည် မလူနာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးနောက်. .
‘အစ်မ အရင်က ၀က်သက်ပေါက်ဖူးလား’ ဟုမေးလိုက်သည်။
‘ကဲ ဒါဆို အခုတော့ အစ်မ ၀က်သက်ပေါက်ပြီပဲ။ ဒီမှာတွေ့လား အရေပြားမှာ အနီပြင်တွေထွက်လာတာ၊ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆို ဒါတွေက ခရမ်းပြာရောင်တွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါ ၀က်သက်ရာဂါရဲ့လက္ခဏာပဲ။ အဲသည်လောက်ဆိုရင်တော့ အဖျားကျသွားပြီး အခုဖြစ်နေတဲ့ နှာစေးချောင်းဆိုးတွေလည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်’
‘ဟင် ဆရာရယ် ကျွန်မ အသက်က အခုပဲ သုံးဆယ်နားကပ်လာပြီ၊ ၀က်သက်က ပေါက်သေးတာပဲလားဆရာ’
‘ဟာ ပေါက်သေးတာပေါ့။ ၀က်သက်က အရင်မပေါက်ဖူးသေးရင် ခန္ဓာကိုယ်က ခုခံအားမရသေးတော့ လူကြီးဖြစ်လာရင်လည်း မပေါက်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာတာနေမှာပေါ့ဗျာ’
‘တိုးတိုးလုပ်ပါဆရာရယ်၊ အပြင်မှာ တခြားလူတွေရှိရင် ကြားသွားပါဦးမယ်။’
‘သြော် ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ အပြင်မှာလည်း ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ နောက်ပိုင်း ဒီအနီပြင်တွေက မျက်နှာတို့ လက်တို့မှာ ထွက်လာရင် လူတိုင်းမြင်မှာပဲ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်တာလူတိုင်းသိမှာပါပဲ ဟဲဟဲ။ ဒါရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိတော့ထားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်ရင် ငယ်မှပေါက်တာထက် ပိုခံရတတ်တယ်ဗျ’
‘ဟင် ဟုတ်လား ဆရာ။ ဘယ်လိုပိုခံရတာလဲ ပြောပြပါဦး’
‘ပိုခံရတယ်ဆိုတာက စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဗျ။ ကလေးအရွယ်တုန်းကဆိုရင် လူတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတော့ ၀က်သက်ရောဂါဝင်လာရင် မခုခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေး ကြိုထိုးပြီး ကိုယ်ခံအားထွက်အောင် လုပ်ပေးရတာဗျ။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့အရွယ်မှာ ၀က်သက်ရောဂါပိုးဝင်ရင် ကလေးတွေက တော်တော်ဖျားကြပြီး အဆုတ်ရောင်တာတို့၊ ဦးနှောက်ရောင်တာတို့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ အဲဒီလိုတစ်ခါဖြစ်ပြီးရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ်ခံအားရသွားပြီး နောက်ဆိုမဖြစ်တော့ပဲ ၀က်သက်ကိုခံနိုင်ရည် ရှိသွားကြတယ်ဗျ’
‘ဟုတ်ပါပြီဆရာ. . လူကြီးမှာကျတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ပြောပါဦး’
‘အဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ၀က်သက်မပေါက်ဖူးသေးတဲ့ လူကြီးတွေကျတော့ သူ့မှာ ၀က်သက်ရာဂါကို ခုခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအားက မရှိသေးဘူး။ တစ်ကယ်လို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ ခုခံအားရှိထားဖူးတယ်ဆိုရင်တောင် အခု ကြီးလာတော့ တစ်ချို့ကိုယ်ခံအားတွေက လျော့နည်းသွားတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ပြောရရင်တော့ သွေးဖြူဥတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် cellular immunity က နည်းသွားတယ်။ ပဋိပစ္စည်းတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် humoral immunity ပဲ ကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို တစ်ခေါက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ခံရတတ်တယ်လို့ ယူဆကြတယ်’
‘ခဏလေး ဆရာ။ ဆရာက ဘိုလိုတွေပါညှပ်ပြောတော့ ကျွန်မနည်းနည်းရှုပ်သွားပြီ။ ကျွန်မနားလည်လိုက်တာက ကြီးလာရင် ငယ်ငယ်တုန်းက ကာကွယ်ဆေးအရှိန် ကုန်သွားလို့ ၀က်သက်ပိုဖြစ်နိင်တယ် အဲသည်လိုလား’
‘အဲသည်လို အတိအကျကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေးက အရှိန်ကုန်သွားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ၀က်သက်ရောဂါကိုတိုက်တဲ့ လူရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်က အသက်ကြီးလာရင် ပြောင်းသွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖိဖိစီးစီးတိုက်နိုင်တယ်။ ကြီးလာတော့ ဒီကောင်က ငယ်နိုင်ပါကွာဆိုပြီး လျော့လျော့ရဲရဲ တိုက်လာတော့ မနိုင်ချင်တော့ဘဲ ရောဂါရဲ့ဒဏ်ပိုခံလာရတဲ့ သဘောပေါ့’
‘သြော် အဲဒါဆို ကြီးမှဝက်သတ်ပေါက်ရင် ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော် ဆရာ။ ဟိုးကလေးအငယ်လေးတွေမှာလို အသက်အန္တရာယ်တွေ ဘာတွေ အထိကော ဖြစ်နိုင်လားဆရာ’
‘ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆထားတာမမှားဘူး။ အသက်မသေရင်တောင် ဦးနှောက်ရောင်ပြီး အသိဥာဏ်ချို့ယွင်းသွားတာတို့၊ အာရုံကြောမကြီးရောင်ပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ’
‘ဒါဆို ကျွန်မတို့ လူကြီးဖြစ်လာရင် ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေး ထပ်ထိုးရမှာပေါ့နော် ဆရာ’
‘အဲဒါကတော့ ပုံမှန်ဆိုရင် မလိုပါဘူး။ ပုံမှန်ဆိုတာက ကိုယ်ခံအားကျတဲ့ရောဂါတွေမရှိဘူးဆိုရင် ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေးက ဆေးထိုးထားပြီးရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ၀က်သက်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ဖြစ်ရင်တောင် ရောဂါအနုစားလောက်ပဲဖြစ်ပြီး ၀က်သက်မှန်းတောင် မသိဘဲ ပျောက်သွားတတ်ကြတယ်ဗျ။ ခုခံအားကျရောဂါရှိတဲ့လူ၊ ၀က်သတ်ရောဂါပိုးနဲ့ အထိအတွေ့များတဲ့လူ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဒါတွေကသာ ထပ်ထိုးဖို့လိုတယ်ဗျ’
‘အဲဒါဆို ငယ်ငယ်တုန်းက မထိုးထားရသေးဘဲ အခုမှ ထိုးမယ်ဆိုရင်ကော ဆရာ၊ ရသေးလားဟင်’
မောင်ဒေါက်တာမှာ မလူနာ၏ မေးခွန်းတွေကို ဖြေနေရင်းမှ တစ်ခုခုကို သတိရသွားပြီး. . .
‘ဒါနဲ့ အစ်မ ငယ်ငယ်ကကော ၀က်သတ်ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ပြည့် ထိုးခဲ့ရလား’
‘အဲ ဟုတ်တယ်ဆရာ။ အဲဒါ..ပြောတာလေ။ ဟို ထိုးမထိုးမသေချာဘူး။ အိမ်က အဖေနဲ့အမေကပြောတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ကြုံသလောက်တော့ထိုးတယ်တဲ့ အဲဒါ..’
‘အင်း အဲဒါ ပြောတာပေါ့။ ကဲ အခု အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အိမ်ကလူတွေကို ၀က်သက်ကဘယ်လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုက်။ ပြီးရင် မထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေကို သွား ထိုးခိုင်းလိုက်ပါ။ အခု စီမံချက်နဲ့ ဒေသန္တရ တွေမှာ ထိုးပေးနေတယ်ကြားတယ်။ လူကြီးဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာက ၀က်သတ်၊ ဂျိုက်သိုး၊ ပါးချိတ်ရောင် သုံးမျိုးပေါင်းကာကွယ်ဆေး MMR vaccine ဆိုတာ ထိုးသင့်တယ်ဗျ။ အဲဒါဆိုရင် တခြားဆက်နွယ်ရောဂါတွေပါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရော’
မလူနာလည်း မောင်ဒေါက်တာပြောသမျှကို ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နားထောင်ရင်း….
‘ဟို နောက်ဆုံးတစ်ခုလောက် မေးချင်တာလေးရှိသေးလို့ပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုပါပဲ ဟိုဟာလေ။ အရင်တုန်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူးပြီးသားလူကကော မသေချာလို့ ထပ်ထိုးရင် ရမလားဆရာ’
‘နှစ်ခါထိုးတော့ ကိုယ်ခံအားတွေ အရမ်းများပြီး တစ်ခုခု ဖြစ်… ‘
‘မဖြစ်ပါဘူး အစ်မရေ ။ စိတ်ချ မထိုးဖြစ်ရင်သာ ပြဿနာ ရှိမယ်။ မသေချာရင် ထပ်သာထိုး။ မဟုတ်ရင် ကြီးမှ ၀က်သက်ပါက်ပြီး ပိုဆိုးကုန်ဦးမယ်ဗျ’
မောင်ဒေါက်တာလည်း မလူနာကို သေသေချာချာရှင်းပြပြောဆိုပြီး သူမပြန်သွားသောအခါမှ ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ရင်း အမောဖြေစဉ် ‘အင်း အမှန်တော့ ငါလည်း ဝက်သက်မပေါက်ရသေးဘူးပဲ တော်ကြာ ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်ရင် ဒုက္ခပဲ’ ဟု တွေးမိကာ တစ်ကိုယ်တည်းပြုံးမိလေတော့သည်။
မောငျဒေါကျတာသညျ မလူနာကို စမျးသပျစဈဆေးပွီးနောကျ. .
‘အဈမ အရငျက ဝကျသကျပေါကျဖူးလား’ ဟုမေးလိုကျသညျ။
‘ကဲ ဒါဆို အခုတော့ အဈမ ဝကျသကျပေါကျပွီပဲ။ ဒီမှာတှလေ့ား အရပွေားမှာ အနီပွငျတှထှေကျလာတာ၊ နောကျတဈရကျနှဈရကျဆို ဒါတှကေ ခရမျးပွာရောငျတှပွေောငျးသှားလိမျ့မယျ။ ဒါ ဝကျသကျရာဂါရဲ့လက်ခဏာပဲ။ အဲသညျလောကျဆိုရငျတော့ အဖြားကသြှားပွီး အခုဖွဈနတေဲ့ နှာစေးခြောငျးဆိုးတှလေညျး သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ’
‘ဟငျ ဆရာရယျ ကြှနျမ အသကျက အခုပဲ သုံးဆယျနားကပျလာပွီ၊ ဝကျသကျက ပေါကျသေးတာပဲလားဆရာ’
‘ဟာ ပေါကျသေးတာပေါ့။ ဝကျသကျက အရငျမပေါကျဖူးသေးရငျ ခန်ဓာကိုယျက ခုခံအားမရသေးတော့ လူကွီးဖွဈလာရငျလညျး မပေါကျနိုငျဘူးလို့ပွောလို့မရဘူးဗြ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကွီးမှဝကျသကျပေါကျတယျဆိုတဲ့ စကားပျေါလာတာနမှောပေါ့ဗြာ’
‘တိုးတိုးလုပျပါဆရာရယျ၊ အပွငျမှာ တခွားလူတှရှေိရငျ ကွားသှားပါဦးမယျ။’
‘သွျော ဘာဖွဈလို့လဲဗြ။ အပွငျမှာလညျး ဘယျသူမှမရှိပါဘူး။ နောကျပိုငျး ဒီအနီပွငျတှကေ မကျြနှာတို့ လကျတို့မှာ ထှကျလာရငျ လူတိုငျးမွငျမှာပဲ။ ဒါဆိုရငျတော့ ကွီးမှ ဝကျသကျပေါကျတာလူတိုငျးသိမှာပါပဲ ဟဲဟဲ။ ဒါရှကျစရာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သတိတော့ထားရမှာ ဖွဈတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကွီးမှ ဝကျသကျပေါကျရငျ ငယျမှပေါကျတာထကျ ပိုခံရတတျတယျဗြ’
‘ဟငျ ဟုတျလား ဆရာ။ ဘယျလိုပိုခံရတာလဲ ပွောပွပါဦး’
‘ပိုခံရတယျဆိုတာက စောစောက ပွောခဲ့တဲ့ကိုယျခံအားစနဈနဲ့ဆိုငျတယျဗြ။ ကလေးအရှယျတုနျးကဆိုရငျ လူတှရေဲ့ ကိုယျခံအားစနဈက သိပျမဖှံ့ဖွိုးသေးတော့ ဝကျသကျရောဂါဝငျလာရငျ မခုခံနိုငျဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကာကှယျဆေး ကွိုထိုးပွီး ကိုယျခံအားထှကျအောငျ လုပျပေးရတာဗြ။ ဒါပမေယျ့ ကာကှယျဆေးမထိုးရသေးတဲ့အရှယျမှာ ဝကျသကျရောဂါပိုးဝငျရငျ ကလေးတှကေ တျောတျောဖြားကွပွီး အဆုတျရောငျတာတို့၊ ဦးနှောကျရောငျတာတို့အထိ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ အဲ အဲဒီလိုတဈခါဖွဈပွီးရငျတော့ ခန်ဓာကိုယျက ကိုယျခံအားရသှားပွီး နောကျဆိုမဖွဈတော့ပဲ ဝကျသကျကိုခံနိုငျရညျ ရှိသှားကွတယျဗြ’
‘ဟုတျပါပွီဆရာ. . လူကွီးမှာကတြော့ ဘယျလိုဖွဈသှားလဲ ပွောပါဦး’
‘အဲ ငယျငယျတုနျးက ဝကျသကျမပေါကျဖူးသေးတဲ့ လူကွီးတှကေတြော့ သူ့မှာ ဝကျသကျရာဂါကို ခုခံနိုငျတဲ့ ကိုယျခံအားက မရှိသေးဘူး။ တဈကယျလို့ ကာကှယျဆေးထိုးထားလို့ ခုခံအားရှိထားဖူးတယျဆိုရငျတောငျ အခု ကွီးလာတော့ တဈခြို့ကိုယျခံအားတှကေ လြော့နညျးသှားတယျလို့ဆိုကွတယျ။ ပွောရရငျတော့ သှေးဖွူဥတှရေဲ့ ကိုယျခံအားစနဈ cellular immunity က နညျးသှားတယျ။ ပဋိပစ်စညျးတှရေဲ့ကိုယျခံအားစနဈ humoral immunity ပဲ ကနျြတော့တယျဆိုတော့ ငယျငယျတုနျးကလို တဈခေါကျ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ပွနျခံရတတျတယျလို့ ယူဆကွတယျ’
‘ခဏလေး ဆရာ။ ဆရာက ဘိုလိုတှပေါညှပျပွောတော့ ကြှနျမနညျးနညျးရှုပျသှားပွီ။ ကြှနျမနားလညျလိုကျတာက ကွီးလာရငျ ငယျငယျတုနျးက ကာကှယျဆေးအရှိနျ ကုနျသှားလို့ ဝကျသကျပိုဖွဈနိငျတယျ အဲသညျလိုလား’
‘အဲသညျလို အတိအကကြွီးတော့ မဟုတျဘူးဗြ။ ဝကျသကျကာကှယျဆေးက အရှိနျကုနျသှားတယျလို့ ပွောလို့မရဘူး။ ဝကျသကျရောဂါကိုတိုကျတဲ့ လူရဲ့ကိုယျခံအားစနဈက အသကျကွီးလာရငျ ပွောငျးသှားတယျလို့ ပွောရမယျ။ ငယျငယျတုနျးက ဖိဖိစီးစီးတိုကျနိုငျတယျ။ ကွီးလာတော့ ဒီကောငျက ငယျနိုငျပါကှာဆိုပွီး လြော့လြော့ရဲရဲ တိုကျလာတော့ မနိုငျခငျြတော့ဘဲ ရောဂါရဲ့ဒဏျပိုခံလာရတဲ့ သဘောပေါ့’
‘သွျော အဲဒါဆို ကွီးမှဝကျသတျပေါကျရငျ ပိုအရေးကွီးတာပေါ့နျော ဆရာ။ ဟိုးကလေးအငယျလေးတှမှောလို အသကျအန်တရာယျတှေ ဘာတှေ အထိကော ဖွဈနိုငျလားဆရာ’
‘ဖွဈနိုငျတယျလို့ ယူဆထားတာမမှားဘူး။ အသကျမသရေငျတောငျ ဦးနှောကျရောငျပွီး အသိဉာဏျခြို့ယှငျးသှားတာတို့၊ အာရုံကွောမကွီးရောငျပွီး အောကျပိုငျးသသှေားတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျတယျဗြ’
‘ဒါဆို ကြှနျမတို့ လူကွီးဖွဈလာရငျ ဝကျသကျကာကှယျဆေး ထပျထိုးရမှာပေါ့နျော ဆရာ’
‘အဲဒါကတော့ ပုံမှနျဆိုရငျ မလိုပါဘူး။ ပုံမှနျဆိုတာက ကိုယျခံအားကတြဲ့ရောဂါတှမေရှိဘူးဆိုရငျ ဝကျသကျကာကှယျဆေးက ဆေးထိုးထားပွီးရငျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ဝကျသကျမဖွဈအောငျ ကာကှယျနိုငျတယျလို့ ဆိုကွတယျ။ တဈကယျလို့ ဖွဈရငျတောငျ ရောဂါအနုစားလောကျပဲဖွဈပွီး ဝကျသကျမှနျးတောငျ မသိဘဲ ပြောကျသှားတတျကွတယျဗြ။ ခုခံအားကရြောဂါရှိတဲ့လူ၊ ဝကျသတျရောဂါပိုးနဲ့ အထိအတှမြေ့ားတဲ့လူ၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ဒါတှကေသာ ထပျထိုးဖို့လိုတယျဗြ’
‘အဲဒါဆို ငယျငယျတုနျးက မထိုးထားရသေးဘဲ အခုမှ ထိုးမယျဆိုရငျကော ဆရာ၊ ရသေးလားဟငျ’
မောငျဒေါကျတာမှာ မလူနာ၏ မေးခှနျးတှကေို ဖွနေရေငျးမှ တဈခုခုကို သတိရသှားပွီး. . .
‘ဒါနဲ့ အဈမ ငယျငယျကကော ဝကျသတျကာကှယျဆေး အကွိမျပွညျ့ ထိုးခဲ့ရလား’
‘အဲ ဟုတျတယျဆရာ။ အဲဒါ..ပွောတာလေ။ ဟို ထိုးမထိုးမသခြောဘူး။ အိမျက အဖနေဲ့အမကေပွောတော့ ကာကှယျဆေးတှေ ကွုံသလောကျတော့ထိုးတယျတဲ့ အဲဒါ..’
‘အငျး အဲဒါ ပွောတာပေါ့။ ကဲ အခု အိမျပွနျရောကျရငျ အိမျကလူတှကေို ဝကျသကျကဘယျလိုတှဖွေဈတတျတယျဆိုတာ ပွောပွလိုကျ။ ပွီးရငျ မထိုးရသေးတဲ့ကလေးတှကေို သှား ထိုးခိုငျးလိုကျပါ။ အခု စီမံခကျြနဲ့ ဒသေန်တရ တှမှော ထိုးပေးနတေယျကွားတယျ။ လူကွီးဆိုရငျတော့ ပိုကောငျးတာက ဝကျသတျ၊ ဂြိုကျသိုး၊ ပါးခြိတျရောငျ သုံးမြိုးပေါငျးကာကှယျဆေး MMR vaccine ဆိုတာ ထိုးသငျ့တယျဗြ။ အဲဒါဆိုရငျ တခွားဆကျနှယျရောဂါတှပေါကာကှယျပွီးသားဖွဈရော’
မလူနာလညျး မောငျဒေါကျတာပွောသမြှကို ခေါငျးတညိတျညိတျနားထောငျရငျး….
‘ဟို နောကျဆုံးတဈခုလောကျ မေးခငျြတာလေးရှိသေးလို့ပါ။ နောကျဆုံးတဈခုပါပဲ ဟိုဟာလေ။ အရငျတုနျးက ကာကှယျဆေးထိုးဖူးပွီးသားလူကကော မသခြောလို့ ထပျထိုးရငျ ရမလားဆရာ’
‘နှဈခါထိုးတော့ ကိုယျခံအားတှေ အရမျးမြားပွီး တဈခုခု ဖွဈ… ‘
‘မဖွဈပါဘူး အဈမရေ ။ စိတျခြ မထိုးဖွဈရငျသာ ပွဿနာ ရှိမယျ။ မသခြောရငျ ထပျသာထိုး။ မဟုတျရငျ ကွီးမှ ဝကျသကျပါကျပွီး ပိုဆိုးကုနျဦးမယျဗြ’
မောငျဒေါကျတာလညျး မလူနာကို သသေခြောခြာရှငျးပွပွောဆိုပွီး သူမပွနျသှားသောအခါမှ ကုလားထိုငျတှငျ ထိုငျရငျး အမောဖွစေဉျ ‘အငျး အမှနျတော့ ငါလညျး ဝကျသကျမပေါကျရသေးဘူးပဲ တျောကွာ ကွီးမှ ဝကျသကျပေါကျရငျ ဒုက်ခပဲ’ ဟု တှေးမိကာ တဈကိုယျတညျးပွုံးမိလတေော့သညျ။